Mhando dzeChirungu Cheka: Ndeapi akanakisa emusoro wenyaya wega? | ECommerce nhau
Mhando dzakanakisa dzeDare reChirungu
Zita ra Dare reChirungu Yakanga iine mavambo ayo anopfuura makore zana apfuura uye inouya kubva kune diki teki chitoro iyo yakavambwa muzana ramakore re100th, chaizvo muna 1890 muMadrid. Muna 1935, makore makumi mashanu mushure mekuvhurwa kwayo, yakatengwa naRamón Areces Rodríguez, nokudaro kutanga nhoroondo yayo yebhizinesi.
Pashure makore akati wandei ekushanduka uye kukura kwechitoro iyo yakaenda kubva pakuve diki dhizaini chitoro kune dhipatimendi chitoro mukugara uchigadzirisa uye kukura, iyo ine yayo mavhu avo edare reChirungu kusvika kwemakumi matanhatu kwakange kuri kiyi kune Dare reChirungu, sezvo yaive mumakore iwayo payakatanga kuwedzera munzvimbo yese yenyika, zvese izvi nekuda kwekuvhurwa kwenzvimbo mumaguta akakosha seBarcelona, ​​Seville, Bilbao nemamwe.
Pakati-ma90, a kukura uye kusiyanisa chikamu cheboka, vachipfuura nekushandurwa pachinzvimbo chehutungamiriri hweboka nekuda kwekufa kwemutungamiriri wenyika asi vasingamiriri kumiswa mukukura kwayo, asi, vachitsvaga kusimba mazuva ese.
Mukati meiyi kusiana, iro dhipatimendi chitoro chikamu che Dare reChirungu, Ivo vane imwe nzvimbo huru yekuitisa mabhizinesi avo akabudirira kwazvo: Fashoni.
Iyi nzvimbo huru ye Dare reChirungu, yakabvumidza kambani kuti ibudise mugore rapfuura mari yakawanda yakasvika pakutengesa emamiriyoni e8.441,5, ayo anomiririra 59% yemari yese yekambani.
Zviri chaizvo munzvimbo yemafashoni umo, mumakore achangopfuura, shanduko huru muhurongwa hwekutengesa hwakaunzwa ne Dare reChirungu. Muna Gumiguru 2013, kambani yakatanga mushandirapamwe Ratidza iyo nyowani, iyo yaanozivisa nayo kudzikiswa kwakawanda kwemitengo yemafashoni uye inotarisa pane avo pachavo makambani.
Nesangano iri, kambani yakaedza kumutsidzira yekutengesa kwefashoni, yakakanganiswa nekuderera kwekushandisa muSpain uye nemutengi achitsvaga mitengo iri nani
2 Chii chinopa El Corte Inglés?
4.1 Chii chimwe chatinga zive nezve mabrandari edare reChirungu
El Corte Shona kirisendi portfolio yemhando dzako neicho chinotsvakwa kukwikwidzana neazvino mafashoni hofori munyika.
Rudzi urwu rwemaketani akamira akachinja nzira iyo fashoni inopedzwa, kwete kuSpain chete, asi pasirese.
Kuti uwane izvi zvese, dhipatimendi rinochengetera kushandisa mhando dzakasiyana dzemhando kubva muzvikamu zvese, hunyanzvi hwepamusoro kana mutengo.
MuSpain, inova nyika inogoverwa hukuru inotongwa nehofori senge Inditex, Mango o Cortefiel; Dare reChirungu Iyo ine mukana wekukwikwidza mumafashoni nemhando dzakasarudzika dzemhando yepamusoro, asi nenzira imwecheteyo, ine hombe portfolio yemakemikari ayo ayo ayo anosvika kune vazhinji vevatengi.
Gore negore, boka remashopu echitoro rinowedzera uye rinosimbisa huwandu hwaro hwezvakapihwa zvigadzirwa nemitambo mitsva, nepo ichiwedzera nzira yayo yepedyo yekuparadzirwa kukuru mumisika yepasi rose, iri Sfera.
Chii chinopa El Corte Inglés?
Dare reChirungu ine portfolio inopfuura makumi maviri neshanu mazita avo, iyo yainotsvaga kukwezva yeruzhinji, yechirume neyevanhu veruzhinji kuburikidza nemhando dzese dzezvigadzirwa zvinogona kubva pane shangu uye zvishongedzo kumachira emachira. Iyo kambani inosanganisa mitsva mitsva kune yayo portfolio gore rega, kutaura makore maviri chete:
Muna 2012 akasarudza zvefashoni uye zvefashoni zvevana neSouthern Cotton uye Yemahara Style.
Muna 2013 yakatanga iyo Jo & Mr Joe mutsetse, uyu mutsetse wakasarudzika mumabhegi evarume, nekudaro kushandisa nekushandisa mukana wekusimudzirwa kwekushandisa kwemafashoni nevanhu veruzhinji.
Kana isu tikatarisa kunharaunda yemafashoni evakadzi, iyo kambani Dare reChirungu inoshanda nemitsetse senge
Zendra, Nyore Kupfeka
Pakati pezvigadzirwa zvevakadzi zvemafashoni, Gloria Ortiz naElogy vanomira, iyo yekupedzisira ichivhurwa mukubatana nemugadziri Juanjo Oliva.
Kune varume, Dare reChirungu ine mitsara yakaita
Yenzvimbo yemafashoni evana, Dare reChirungu inoshanda pamwe
Nenzira imwechete iyo mabhureki matsva anoonekwa, naivowo anonyangarika. Imwe yenyaya umo mutsetse wakanzurwa yave yeGals & Guys, iri Dare reChirungu raparurwa muna 2011 zvizere tiguu muSpain yeAbercrombie & Fitch phenomenon uye kuti yakadzima pakupera kwa2012. Muzvitoro zveshangu, mitsara yakadai saRenoir yanyangarika.
Mhando dzese idzi dzinogovaniswa zvese kuburikidza nebazi rezvitoro zveboka uye kuburikidza neakasiyana mafashoni zvitoro.
Mumakore apfuura, mitsara yakadai seSíntesis yaingova nezvitoro zvakati, asi ikozvino boka raendesa network yezvitoro yakanangana nefashoni yepamusoro, inozadziswa nevamwe vanozivikanwa mune mamwe mapoka, akadai sehembe dzemukati.
Sfera Yakabuda nechinangwa chekubata nemutengesi mukuru wefashoni, asi yaifanira kugadzirisa zvairi kupa uye zano rayo rekuwana purofiti.
Iwo akanaka ehupfumi manhamba akapihwa ichi chiratidzo El Corte Shona zvinowirirana pamwe bheji zvakafanana kukura pamwe Sfera kunze kwemusika weSpain.
Iyo kambani yakavamba nekugadzira chirongwa icho chairi kuda kuvhura chikamu chechipiri chekuvandudza kwenyika dzatarisana neLatin America, Middle East neAsia. Sfera Yakave zvakare yakwanisa kusvika kumisika senge Switzerland.
Izvo zvairi ikozvino kuda kugadzirisa yayo yega nzira yekusimudzira kunze kweSpain, kuti ikwanise kukwikwidza pasi rose nevamwe vanokwikwidza vakaita se Marks & Spencer.
Iri boka rezvitoro zvemadhipatimendi rinotsvaga nzira yekupa nyowani nyowani kumhando dzayo, neizvi inogadzirira kutangwazve kwe Gloria Ortiz, iyo inopinda machira achiva marita e kutarisa kwakazara. Panguva imwe chete iyo kambani ichave ichiita kurongwazve kwemakemikari mumadzimai emafashoni emadzimai.
Nekutangazve uku, iyo mhando ichaita kusvetuka kupfuura shangu uye zvishongedzo. Nekupinda mumachira e Gloria Ortiz Mumwe anogona kufunga nezve kubatanidzwa kwevamwe vakadzi zvigadzirwa kubva Dare reChirungu, se Sendra o Uye.
Mukadzi ndiye ruzhinji runofambisa kutengesa kwefashoni kwe Dare reChirungu. Iyo data yeiyo Bhizinesi Sangano reMachira uye Zvishandiso Kutengesa (Acotex) iratidze, yeruzhinji rwevakadzi muna 2015 yakaburitsa 37,2% yekutengesa kwefashoni kuSpain, vateereri vechirume vaimiririra 32,1% yebhizimusi rese uye mukomana, 13,2%.
Yezve gore remari rakavharwa muna Kukadzi 2015, Dare reChirungu yakanga iine mutero wemamirioni e4.305 emamiriyoni nekuda kwemafashoni, zvishongedzo, runako uye zvishongo.
Iyo nhamba inomiririra 51,5% yebhizimusi rese reboka. Pakati pemwedzi gumi nembiri pamberi pechiyero ichocho, kutengeswa kwefashoni, zvishongedzo, runako uye zvishongo kubva Dare reChirungu ivo vakakwira 11,6%.
Ruwoko ruoko pamwe nekuzvipira kune ako marandi, El Corte Shona Iri zvakare kugadzirisa zvakare zvigadzirwa zvekunze zviripo mumadzimai emafashoni ayo. Aya mafambiro anopindura zvese kuzvipira kweboka kusanganisa mafemu matsva uye nekubva kwevamwe.
Mumakore achangopfuura, Dare reChirungu yaita huwandu hwakawanda hwekufamba mudanho rayo rebazi remafashoni, kambani yakaedza kukwikwidza kurwisa macheni makuru ekuparadzira kubheja, kutanga, pakuvhurwa Sfera uye gare gare nekusaina kwevatungamiriri kubva kumakambani akadai seInditex, avo vaitungamira kutanga mishandirapamwe yakadai Ratidza iyo nyowani, iro iro boka remadhipatimendi ezvitoro rakadzikisa mitengo yaro mufashoni.
Chii chimwe chatinga zive nezve mabrandari edare reChirungu
Iri boka rakakosha rakatarisa mumakore achangopfuura pakuwedzera kwayo portfolio yemafashoni emhando, kubheja pazvose zviri zviviri kudyiwa uye zvepamusoro Saizvozvowo, kambani yakagadzira nzvimbo dzakasarudzika dzevarume nevakadzi dzinopa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro.
ari Zvayo zvigadzirwa zveChirungu Dare ndizvo zvinoratidza zano rezvitoro izvi rekupa mbatya dzemafashoni dzemhuri yese nemitengo yakaderera pane iya yemhando hombe uye inozivikanwa.
Dare reChirungu Iyo inotova neinonakidza kwazvo portfolio yemhando dzayo uye inomiririra yakabudirira uye iri kukura bhizimusi modhi inotsvaga kuzvipfuudza pachezvayo nevanokwikwidza nayo kuburikidza nekuratidzira uye kushanda mushandirapamwe unoratidza ruzivo rwakazara rweveruzhinji kwainovatuma. izvo zvinodikanwa uye zvinodikanwa zvezvikamu zvandiri kupa, kunyangwe kana ivo vari vari kunopindirana kumagumo emusika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Zvechokwadi uye nhau » StartUps uye vanamuzvinabhizimusi » Mhando dzakanakisa dzeDare reChirungu
Chii uye ndivanaani vane mukurumbira mukurudzira muSpain
Google Campus Madrid: chidimbu chiduku cheSilicon Valley muSpain